Wax Ka Baro dalka New Zealand - Waadinews | Somali News and Entertainments
New Zealand Waa dal jasiirado ka kooban oo ka tirsan qaaradda Oceania (Oshiyaaniya), Waxa uu ku yaallaa Koonfurta Galbeed ee badweynta Pasific-ga, iyo Koonfurta Bari ee Australia. Ma jiro waddan ay wadaagaan xuduud dhulleed. Dhulka: Baaxadda dhulka ay ku fadhido New Zealand waxaa lagu qiyaasaa ilaa 268,838 Kiiloo Mitir oo Isku wareeg ah. Caasimadda New Zealand waxaa la yidhaahaa Wellington.
Dadka: Qiyaas la qaaday bishii July 2018 ayaa ku qiyaastay tirada dadka ku nool Wadankan ilaa 4,545,627 (Waa afar malyan iyo Badh), Celceliska cimri-dheerida reer New Zealand ayaa gaadhaya 81.4 sannadood.(Haweenka 83.6 Sannadood Ragga 79.2 Sannadood).
Luuqadda: Luuqadda rasmiga ah waa af Ingiriisiga, Waaxaan ku hadla boqolkiiba 89.8. Diinta: dadka ku dhaqan waddankan boqolkiiba 44.3 waxa ay haystaan Diinta Kiristaanka. Boqolkiiba 2.1 waa Hindu, boqolkiiba 1.4 waa buudiyiin, Muslimiintu waa 1.1 boqolkiiba. Halka ay boqolkiiba 38.5 bilaa diin yihiin.
Nidaamka dawladnimo: Dalka waxaa ka jira nidaam baarlamaaneed dimuqraadi ah oo ka hoos shaqeeya boqortooyo distoori ah. New Zealand waxa gumaystay boqortooyada Ingiriiska oo ay xorriyaddeeda ka qaadatay 26 September 1907. Khayraadka Dabiiciga ah: Dalkani waxa uu leeyahay khayraad dabiici ah oo ay ka mid yihiin, Gaaska wax lagu karsado, Xadiidda qaydhin, Niista, Dhuxusha, Looxa, Tamar biyoodka, iyo Dahabka.
Waxsoosaarka: Wax-soo-saarka dalkan waxaa ka mid ah, Caanaha, Hilibka Xoolaha, Warqadda, qalabka, Macdanta iyo dalxiiska. Dhaqaalaha: Dhaqaalaha dalkani waxa uu si laxaad leh ugu tiirsan yahay dhinaca Adeegyada (Services), waxaana ka soo xarooda dhaqaale uga dhigma wax-soo-saarka dalka (GDP) boqolkiiba 72.8. Dhinaca Wershadaha waxaa ka soo xarooda dhaqaale u dhigma boqolkiiba 21.5, Beeraha oo ah meelaha ugu liita waxaa ka soo xarooda dhaqaale u dhigma boqolkiiba 5.7 kaliya.
Wax soosaarka Dalkan waxaa lagu qiyaasay sannadkii 2017-kii ilaa 189 bilyan oo Dollar. Haddii dhaqaalaha dalka si saman loogu qaybiyo shacabka waxaa qofkiiba ku soo hagaagaya sannadkii 39,000 oo Doollar.
Heerka Shaqo la’aantuna waxa uu cagacagaynaya boqolkiiba 4.7. Caafimaadka: Xukuumadda New Zealand, Boqolkiiba 11, Wax soo saarkeeda waxa ay ku bixisaa dhinaca caafimaadka.
Tirada dadka la nool xanuunka dilaaga ah ee HIV/AIDs ayaa lagu qiyaasaa 3,700 oo ruux, halka dadka u dhintay xanuunkanna lagu qiyaasay 100 ruux. Dadka ka cabanaya cayilaadda ayaa u dhigma boqolkiiba 30.8. Waxbarashada: Dawladda Newzealand, Waxa ay ku bixisaa dhinaca wax-barashada dakhli u dhigma boqolkiiba 6.3 wax soo saarkeeda. Celceliska da’da dugsiyada lagaga qalin jabiyaana waa 19 sano.
Related Topics:New zealandWax ka baro dalka New Zealand
Sawirrada dadkii New Zealand lagu laayey iyaga oo masaajid ku Tukanaya
New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern says ‘We are one’ at Friday prayer gathering
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ee New Zealand Oo Ka Qaybgalaya Shirka Ururka Iskaashiga Islaamka
Madaxweynaha Turkiga oo dalbaday in la dilo Ninkii Muslimiinta Ku Laayey New Zealand
US politics divided over the New Zealand terror attacks